အနုပညာသာ စစ်မှန်ရင်ကျောက်တုံးလေးတစ်တုံးကလည်း သိန်းချီ တန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို Soft Pen တစ်ချောင်းနဲ့ သက်သေပြလိုက်နိုင်တဲ့ ကျားပေါက် – Daily News
အနုပညာသာ စစ်မှန်ရင်ကျောက်တုံးလေးတစ်တုံးကလည်း သိန်းချီ တန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို Soft Pen တစ်ချောင်းနဲ့ သက်သေပြလိုက်နိုင်တဲ့ ကျားပေါက်
November 17, 2021 - by admm
အဆိုတော်ဟန်ထူးလွင်ခေါ်ကျားပေါက်ဟာ အနုပညာစွမ်းရည်ပါရမီပြည့်ဝလွန်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ကိုကျားပေါက်ဖန်တီးထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ အနုပညာလက်ရာဟာလည်း တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများနဲ့ ဖန်တီးထားတာမျိုး
မဟုတ်ဘဲ Soft Pen လေးတွေနဲ့သာ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့အနုပညာလက်ရာမျိုးဖြစ်တာကြောင့်Soft Pen တစ်ချောင်းတည်းနဲ့ဖန်တီးထားစေကာမူ ဈေးနှုန်းတန်ဖိုးက အဖိုးထိုက်တန်လှပါတယ်။
အခုဆိုရင်ကိုကျားပေါက်ရဲ့Soft Pen လေးတွေနဲ့ ဖန္တီးထားတဲ့Doodle Art လက်ရာလေးတွေဟာဆိုရင်ကမ္ဘာကျော်တဲ့အထိကို ဖြစ်နေပါပြီ။ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းများစွာ ဖန်တီးလှူဒါန်းနိုင်တဲ့Doodle Art လက်ရာလေးတွေကိုSoft Pen လေးတစ်ချောင်းတည်းနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကျားက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာအခုလိုပြောလာပါတယ်။
အိမ္မရွိဘူး။ ပိုက်ဆံမရွိဘူး။ နိုင်ငံမရှိဘူး။ Soft pen ရှိတယ်။ And this happened. Thank you Ako Mgmgaye , nyima Pencilo (and my hidden guardian angel gangsta) everyone involved in this little charity of mine. Stay strong my brothers and sisters of Chin state. This one goes out to you. Well get through this as one. Love Kp (ထပ်လှူဖြစ်တဲ့နေရာupdate ပါမယ်)။ အိပ်ပြီ။
ကိုကျားပေါက်Soft Pen လေးတစ်ချောင်းတည်းနဲ့ ဖန္တီးထားတဲ့Doodle Art လက်ရာလေးတွေကနေ ရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာသိန်းပေါင်း၁သောင်းကို ထန်တလန်အတွက်လှူဒါန်းလိုက်နိုင်တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအခြားနေရာတွေကို ထပ်မံလှူသွားပေးသွားမယ်လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ထားပါတယ်။
အနုပညာသာ စစ်မှန်ရင်ကျောက်တုံးလေးတစ်တုံးကလည်း သိန်းချီ တန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ဆရာက်ားက သက်သေပြပေးလိုက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရမ်းကို ထူးချွန်လှတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ေ ယာက်အနေနဲ့တော်တော်လေးကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
အနုပညာသာ စဈမှနျရငျကြောကျတုံးလေးတဈတုံးကလညျး သိနျးခြီ တနျသှားနိုငျတယျဆိုတဲ့စကားကို Soft Pen တဈခြောငျးနဲ့ သကျသပွေလိုကျနိုငျတဲ့ ကြားပေါကျ
အဆိုတျောဟနျထူးလှငျချေါကြားပေါကျဟာ အနုပညာစှမျးရညျပါရမီပွညျ့ဝလှနျးတဲ့ သူတဈယောကျပါ။ကိုကြားပေါကျဖနျတီးထားတဲ့စဈမှနျတဲ့ အနုပညာလကျရာဟာလညျး တနျဖိုးကွီးပစ်စညျးမြားနဲ့ ဖနျတီးထားတာမြိုး
မဟုတျဘဲ Soft Pen လေးတှနေဲ့သာ ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။စဈမှနျတဲ့အနုပညာလကျရာမြိုးဖွဈတာကွောငျ့Soft Pen တဈခြောငျးတညျးနဲ့ဖနျတီးထားစကောမူ ဈေးနှုနျးတနျဖိုးက အဖိုးထိုကျတနျလှပါတယျ။
အခုဆိုရငျကိုကြားပေါကျရဲ့Soft Pen လေးတှနေဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့Doodle Art လကျရာလေးတှဟောဆိုရငျကမ်ဘာကြျောတဲ့အထိကို ဖွဈနပေါပွီ။ငှကေပျြသိနျးပေါငျးမြားစှာ ဖနျတီးလှူဒါနျးနိုငျတဲ့Doodle Art လကျရာလေးတှကေိုSoft Pen လေးတဈခြောငျးတညျးနဲ့ဖနျတီးထားတဲ့အကွောငျးကိုဆရာကြားက သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာအခုလိုပွောလာပါတယျ။
အိမ်မရှိဘူး။ ပိုက်ဆံမရှိဘူး။ နိုငျငံမရှိဘူး။ Soft pen ရှိတယျ။ And this happened. Thank you Ako Mgmgaye , nyima Pencilo (and my hidden guardian angel gangsta) everyone involved in this little charity of mine. Stay strong my brothers and sisters of Chin state. This one goes out to you. Well get through this as one. Love Kp (ထပျလှူဖွဈတဲ့နရောupdate ပါမယျ)။ အိပျပွီ။
ကိုကြားပေါကျSoft Pen လေးတဈခြောငျးတညျးနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့Doodle Art လကျရာလေးတှကေနေ ရနျပုံငှအေမရေိကနျဒျေါလာသိနျးပေါငျး၁သောငျးကို ထနျတလနျအတှကျလှူဒါနျးလိုကျနိုငျတာ ပဲဖွဈပါတယျ။နောကျထပျလညျးအခွားနရောတှကေို ထပျမံလှူသှားပေးသှားမယျလို့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျထားပါတယျ။
အနုပညာသာ စဈမှနျရငျကြောကျတုံးလေးတဈတုံးကလညျး သိနျးခြီ တနျသှားနိုငျတယျဆိုတဲ့စကားကို ဆရာကျားက သကျသပွေပေးလိုကျနိုငျတာပဲဖွဈပါတယျ။အရမျးကို ထူးခြှနျလှတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈတဲ့အတှကျလညျး မွနျမာနိုငျငံသားတဈေ ယာကျအနနေဲ့တျောတျောလေးကို ဂုဏျယူမိပါတယျ။
Previous Article ချစ်ဇနီးလေး ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့လို့ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် နေထူးနိုင်
Next Article အောင်မြင်နေတဲ့အလှမယ်ဘဝကို စွန့်လွှတ်ကာ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ အဆင်ပြေသလို ကြိုးစားနေထိုင်နေတဲ့အကြောင်း ပုံရိပ်လေးတွေကို ခ်ျပလာတဲ့ မြတ်သီရိလွင်